TABABARKA DOORASHADA TAKHASUSKA JAAMACADEED 2017 – Hope Generation – جيل الأمل
Tababar si joogto ah u dhaca sanad kasta xiliga fasaxa iskuulada ayaa si habsami leh ugusoo gabagaboobay Xarunta machadka Luqadaha ee jamacadda Muqdisho ee ku taala degmada hodan magaalada Muqdisho.
Tababarkan waxaa soo qabanqaabiyay ururka dhalinyarada جيل الأمل – Hope Generation oo fadhigiisu yahay Magaalada Muqdisho, waxaana looga golleeyahay in kor loogu qaado wayiga ardayga Soomaaliyeed uu ka haysto waxbarashada sare iyo sidoo kale in labaro qaabka uu kudooran karo takhasuska ku haboon heerka jaamacadda si aysan u habaabin.
Tababarkan oo muddo laba bilood ah socday, ardayduna u galeen dufcad-dufcad, ayaa waxaa daahfuray Guddoomiyihii hore ee ururka Hope Generation Mudane Sayyid Ali Gaabane iyo maxada xafiiska arimaha ardayda ee jaamacadda muqdisho Mudane Muuse Axmed.
Ma aha markii ugu horreysay ee uu uruku qabto tababar nuucan oo kale ah, waxaa xusid mudan in sanadkii hore xilligan oo kale uu ururku u qabtay arday gaareysay 1000 arday, sanadkanna waxaa ka faa’iideystay 2000 oo arday ah.
Ka Daawo Gunudkan Sawirada tababarkii sanadii hore 2016, http://hogeso.org/…/tababarkii-sanadlaha-ahaa-ee-ardayda-d…/